aQuellé – Ihlala njalo isobala – KwaSizabantu Mission
Sunday service 25 October 2020 October 25
Home > Posts > Media releases > aQuellé – Ihlala njalo isobala
aQuellé – Ihlala njalo isobala
IKwasizabantu Mishini kanye nama projects ayo i-aQuelle ne Emseni Farming iqoke iphaneli ezimele enabantu ababili ukuba baphenye lezi zinsolo eziveziwe ngokuphuthuma (umlando omfushane walaba ababili ubhalwe lapha kanye nencazelo yomsebenzi abathweswe wona). Umsebenzi abanikwe wona ubala ukuba bafinyelele esiphethweni ngo-09 October 2020. Ngenxa yokuqeqesheka kanye nesipiliyoni abanaso, bakulungele ukucubungula zonke izinsolo ngendlela efanele.
Ummeli uKhumbu Shazi, wasohlelweni lwabameli eThekwini. Kafushane umlando wakhe wobuchwepheshe yilo:
2002 – 2006 Umshushisi (Enkantolo yesifunda)
2007 – 2010 Ummeli kahulumeni emazingeni aphakeme – Umqondisi wophiko lwama Scorpions
2011 – 2016 Ummeli kahulumeni emazingeni aphakeme – Uphiko lobugebengu obuhleliwe (Ehhofisini le DPP (abashushisi bakahulumeni))
2017 – inhlangano yabameli eThekwini
Isipiloyoni asithole kule minyaka eyi-13 engumshushisi sihlanganisa ukushushisa ubugebengu obuqondene namabhizinisi, amacala okuhlukumeza kanye nokunukubeza ngokocansi
Ummeli uPeter Le Mottee, Ummeli osebenzela eGoli. Kafushane, umlando wakhe wobuchwepheshe yilo:
Wamukelwa ukuba ngummeli ngo 1984
Wasebenza emsebenzini wenkonzo enhlanganweni i-Scripture Union Mission kusukela ngo-1984 kuya ku-1988
Ngo-1989 waqala ukusebenza njengommeli eGoli kuze kube namhlanje.
Ulwazi olunzulu maqondana namacala asenkantolo ephakeme, kubalwa umthetho wezamabhizinisi kanye nokuthola futhi nokuqinisekisa izinhlobo ezahlukene zobufakazi.
Ukhonze iminyaka eminingi njengomhlanganisi wephaneli lokulamula lase-Methodist Church, enegunya emazweni ayi-6 aseningizimu ne-Africa. Lokhu kubandakanya ukuba usihlalo noma ukwengamela uma kudingidwa amacala noma kwenziwa uphenyo. [Ababili ababekwiphaneli yakhe ngaleso skhathi kubalwa u uMahluleli u Justice Madlanga (Wenkantolo Yomthetho Sisekelo – ngaleso sikhathi wayengumeluleki ophakeme) kanye neJaji u-Bloem (ngaleso sikhathi wayengumeluleki – manje ungumahluleli enkantolo ephakeme)]
Ube yingxenye ye-National Council of Scripture Union kusukela ngo-2012 kuze kube namhlanje.
Wathweswa iziqu ezifundweni zezeBhayibheli ngo 1992.
Abameli i-Arnott & Associates, Attorneys, Suite 159, Cowey Road, Berea, Durban (Tel: 031 207 9071 e-mail: [email protected]) baqokiwe ukulekelela le phaneli ezintweni ezithinta uphenyo oluzimele nokulekelela ngokubhala kanye nokwamukela nokuhlanganisa imininingwane edingwa yiphaneli.
I-aQuellé eyisisulu soqobo
IKwasizabantu mission kanye nama projects ayo i-aQuellé ne-Emseni Farming isibe ngaphansi kokuhlaselwa okukhulu ngezinsolo eziningi, kubalwa ukunukubeza ngokocansi, ukukhwabanisa izimali kanye nokuba yi nkoloze. Eziningi zalezi zinsolo azivezi imininingwane ecacile futhi azikhulumi ngokuqondile. Lokhu kwenza kube nzima ukuphendula ngendlela egculisayo. Inhloso esobala yale ndlela yokuhlasela ngodlame wukuba kungabi lula ukuphendula zonke izinsolo. Akungabazeki ukuthi lokhu…
IKwasizabantu Mishini kanye nama projects ayo i-aQuelle ne Emseni Farming iqoke iphaneli ezimele enabantu ababili ukuba baphenye lezi zinsolo eziveziwe ngokuphuthuma (umlando omfushane walaba ababili ubhalwe lapha kanye nencazelo yomsebenzi abathweswe wona). Umsebenzi abanikwe wona ubala ukuba bafinyelele esiphethweni ngo-09 October 2020. Ngenxa yokuqeqesheka kanye nesipiliyoni abanaso, bakulungele ukucubungula zonke izinsolo ngendlela efanele. Laba: Ummeli…
Tagged with media release, Zulu
Qhawe - freed!